Global Voices teny Malagasy » Maodely Superhero Bitika Manentana ny Fifidianana Azy ho Governora an’i Jakarta ao Indonezia Indray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Janoary 2017 14:15 GMT 1	 · Mpanoratra Juke Carolina Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Indonezia, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika
Maodely bitika ny governoran'i Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, fanta-bahoaka kokoa ho “Ahok.” Sary avy amin'i Dennys Wang, nahazoana alalana.
Miely haingana ao amin'ny media sosialy ny andian-tsary mampiseho ny maodely bitika an'i Basuki Tjahaja Purnama, governoran'i Jakarta, fanta-bahoaka kokoa ho “Ahok”.
Ny maodely bitika an'i Ahok dia natsangan'ilay artista Dennys Wang, manampahaizana manokana amin'ny fanaovana maodelin'olo-malazan'ny superhero. Tamin'ity indray mitoraka ity izy nifidy ny hanangana ny superhero keliny manokana, ny govenoran'ny renivohitr'i Indonezia.
Mahatonga ny sary ho tena mahasarika tanteraka, naka ny sarin'ny governora bitika manao fampielezan-kevitra sy miarahaba ireo mpifidy eny amin'ny toeram-bahoaka isan-karazany ao an-tanàna avy eo i Wang. Nalefany tao amin'ny Facebook ny sary ary nomeny anarana hoe “Fanentanana bitika” (Kampanye Miniatur ).
Tafiditra tao anatin'ny raharaha fanompana zava-masina  i Ahok hatramin'ny herintaona teo, izay mbola mifaninana ho amin'ny fifidianana azy indray amin'ity taona ity, ka nisy aza moa ny filàna ny hisehoany teny amin'ny fitsarana  [mg].
Ao Indonezia, matetika miampanga an'i Ahok noho ny finoany sy ny foko misy azy ny firenena malaza be Silamo indrindra manerantany. Tamin'ny herintaona, olona an’ hetsiny no nivory  teny an-dalambe, miantso ny fandroahana an'i Ahok noho ny filazana fa nanevateva ny finoana silamo izy.
Mitsikera ny fomba fitantanan'i Ahok ihany koa ny vondrona, izay milaza fa midera ny saranga antonony izy ka voa mafy ny mahantra.
Na dia niharatsy aza ny lazany noho ny fampangana fitenenan-dratsy. Mbola i Ahok no loha laharana amin'ny fififaninana hofidiana governora, araka ny fanadihadiana tany am-boalohany.
Nandritra ny firesahany tamin'ny Global Voices, nizara ny antony namoronany ny maodely Ahok bitika i Dennys:
Ao Etazonia sy any ivelany, marobe ireo olo-malaza [ara-politika], tahaka an'i Barack Obama, Abraham Lincoln, Winston Churchill, ary lehilahy goavana izy rehetra ireo. Mino aho mendrika ny ho olo-malaza manokana i Ahok, mba hisolotena an'i Indonezia.
Nilaza i Dennys fa Jakartana maro no nientanentana mahita ny governora bitika miarahaba azy ireo eny an-dalambe. Ireto ambany ireto ny sary sasany avy amin'ny tetikasa “Fanentanana Bitika”:
Sary bitikan'i Ahok governora. Sary avy amin'i Dennys Wang, nahazoana alalana.
Ahok bitika miarahaba ny mponina ao Jakarta. Sary avy amin'i Dennys Wang, nahazoana alalana.
‘Ahok’ miarahaba ny mpifidy azy. Sary avy amin'i Dennys Wang, nahazoana alalana.
Ahok kely miarahaba ny mpanohana azy. Sary avy amin'i Dennys Wang, nahazoana alalana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/01/20/94345/
 fanompana zava-masina: http://www.abc.net.au/news/2016-12-27/indonesia-court-to-proceed-with-blasphemy-trial-of-jakarta/8149656